Ny fomba fanaovana fitiliana hipotisy amin'ny statistika
Ny hevitra momba ny fitsapana ny hypothesis dia mora tsotra. Amin'ny fandalinana samihafa dia mitazana hetsika sasany isika. Tsy maintsy manontany isika, moa ve ilay hetsika noho ny kisendrasendra fotsiny, sa misy antony tokony hitadiavantsika azy? Ilaintsika ny manana fomba hanavahana ny tranga izay mety hitranga tsy ampoizina ary ireo izay tsy dia mahazatra loatra ny miseho tsindraindray. Ny fomba toy izany dia tokony ho voafaritra tsara sy voafaritra mazava tsara mba hahafahan'ny hafa mamaly ny fanandramana misy ny statistika.
Misy fomba maro samihafa ampiasaina mba hanaovana fitiliana hypothesis. Ny iray amin'ireo fomba ireo dia fantatra amin'ny fomba nentim-paharazana, ary ny iray hafa dia midika hoe fantatra amin'ny hoe p - valiny. Ny dingana roa amin'ireo fomba roa mahazatra indrindra dia mitovy amin'ny teboka, avy eo dia miova kely. Na ny fomba nentim-paharazana momba ny fitsapana hypothesis sy ny fomba fiasa p -value dia aseho etsy ambany.
Ny fomba nentim-paharazana
Ny fomba nentim-paharazana dia toy izao manaraka izao:
Atombohy amin'ny filazanao ny fangatahana na ny fanadihadiana izay voazaha. Manaova fanambarana koa ho an'ny tranga izay diso.
Soraty ireo fanambarana roa avy amin'ny dingana voalohany amin'ny marika matematika. Ireo fanambarana ireo dia hampiasa marika toy ny tsy fitoviana ary mitovy ny famantarana.
Fantaro hoe iza amin'ireo fanambaràna roa ireo no tsy mitovy aminy. Izany dia mety ho marika "tsy mitovy", fa mety ho "latsaky ny" famantarana (). Ny fanambarana misy ny tsy fitoviana dia antsoina hoe Hypothesis hafa , ary voalaza fa H 1 na H a .
Ny fanambarana avy amin'ny dingana voalohany manao ny fanambarana fa ny mari-pamantarana iray mitovy lanja manokana dia antsoina hoe "hypothesis" nôlôlôla, voamarina hoe H 0 .
Fidio izay lanjany manan-danja izay tiantsika. Ny lanjan'ny dikany dia asongadin'ny litera grika alpha. Eto isika dia tokony handinika ny fahadisoana Ireto. Misy karazana I ny fahadisoana rehefa mandà ny fisainana tsy misy dikany marina isika. Raha tena miahiahy momba io mety hitranga io isika, dia tokony ho kely ny lanjantsika ho an'ny alpha . Misy ny fivarotana kely eto. Ny kely kokoa ny alpha, ny lafo indrindra ny fanandramana. Ny soatoavina 0.05 sy 0.01 dia singa iraisana ampiasaina amin'ny alpha, fa ny isa tsara rehetra eo anelanelan'ny 0 sy 0.50 dia azo ampiasaina amin'ny lanjany.
Fantaro hoe iza no tokony hampiasana ny statistika sy ny fizarana. Ny karazana fizarana dia aseho amin'ny endriky ny angona. Ny fizarana iombonana dia: z score , t score and chi-squared.
Hitady ny statistika fanamarinana sy ny sanda manan-danja amin'ity statistika ity. Eto isika dia tsy maintsy mandinika raha manao fitsapam-pisedrana roa isika (amin'ny ankapobeny rehefa misy ny "hypothesis" hafa dia misy "marika tsy mitovy", na karazana fitsapam-pahaizana iray (ampiasaina rehefa misy ny tsy fitoviana eo amin'ny fanambarana momba ny fitsapana hafa ).
Avy amin'ny karazana fizarana, ny taham-pahatokisana , ny sanda mananontanona sy ny statistiquement dia mamelatra grafika iray.
Raha toa ny statistika fanandramana dia ao amin'ny faritra misy antsika, dia tokony handà ny fombam-pitenenana tsy misy isika . Ny toetr'andro dia misy . Raha tsy ao amin'ny faritra misy antsika ny statistika fanadinadinana, dia tsy afaka mandà ny fisainana tsy misy isika. Tsy manaporofo izany fa marina ny fombam-pitenenana, saingy manome fomba hamadihana ny mety ho marina.
Amin'izao fotoana izao dia milaza ny valin'ny fitsapam-pahaizana momba ny fitsapana amin'ny fomba toy izany ny adihevitra voalohany.
Ny p -Value fomba
Ny metaly p -value dia mitovy amin'ny fomba nentim-paharazana. Ny dingana enina voalohany dia mitovy. Ho an'ny dingana fito dia hitantsika ny statistika fanandramana sy ny p -value.
Noho izany, mandà ny fombam-pitenenana tsy misy ifandraisana isika raha toa ka latsaka ambany na mitovy amin'ny alpha ny p -value. Tsy afaka mandà ny fisainan-kevitra tsy misy isika raha ny p -value dia lehibe noho ny alpha. Amin'izay isika dia mameno ny fitsapana toy ny teo aloha, amin'ny filazàna mazava ny vokatra.
Inona no sanda?
Tallies sy Counts ao amin'ny statistika
Famoronana fahazoana Access Database 2013 avy amin'ny Scratch
Ahoana ny fametrahana Microsoft Access 2010
Ny fahasamihafana eo amin'ny Deviations an'ny mponina sy ny mari-pahaizana
Mamorona endrika amin'ny Microsoft Access 2013
Inona no atao hoe histogram?
Ny fahasamihafana eo amin'ny fahaiza-manao sy ny statistika
Ohatra an'ny Tample Tample T roa sy fahatokisan-tena
Ny fomba hampisehoana na afenina ny Tabs ao amin'ny Microsoft Access 2010
Ahoana ny famakiana ny Symbols sy ny lokony amin'ny Maps Weather
Fifandimbiasana eo amin'ny Gesso sy ny famolahana
Ahoana ny fametrahana gaza amin'ny afo
Fahadisoana fahadimy nataon'ireo mpandahateny anglisy
Tanàna Etazonia manan-karena lehibe 8
Inona ny Kurultai?
Firy ny vidin'ny vidin'ny famakianao?
Mpamaritra miteny frantsay
Pomona College GPA, SAT sy ACT Data
Fandikan-tenin'ny Baiboly malaza
Inona no atao hoe Bouddha?
Ahoana ny fomba hanaovana ny Yule Log
Ny fanatrehana na ny fiheverana dia ny fahaizana talohan'ny fahaizana mianatra
Ny niavian'ny lalàna manga ao Amerika
Artists with the Hot Pop 100 hits in the '80's
Ejipsana fahiny: Fonenan'ny Kalandrie maoderina
Famaritana tantara momba ny zavakanto: Ny Dimensiona fahefatra
Fanatsarana ny moron-dranomasina 2 - Fanatsarana ny gilasy
Ny haza sy ny vatana ampiasain'ny kayak
Inona no nahatonga an'ilay aretina lehibe?
Fomba sy tarehimarika hitaomimus